Adeeg aad u fiican - AOOD Technology Limited
AOOD waxay ku dadaaleysaa inay siiso adeegga ugu fiican macaamiisheena. Waxaan si firfircoon uga qaybqaadannaa marxaladda naqshadeynta hore ee macaamiisheenna, annagoo si buuxda u tixgelinayna signalada kala duwan iyo khadadka korontada, meel bannaan, rakibidda, bay'ada iyo shuruudaha wax-qabadka, waxaan siinnaa talooyin xirfadeed oo aan ka caawinno sidii ay u heli lahaayeen xalka is-beddelka ee is-bedbeddelka ah-giraanta silsiladda.
Jawaab degdeg ah ayaa shardiga aasaasiga u ah iibiyaha AOOD kasta. Waxaan ilaalinaa Helitaanka macaamiisha 24/7 waxaanna hubinnaa in su'aalahooda / baahidooda lagu xallin karo waqtiga ugu gaaban. Marka uu jiro dib -u -dhac xagga wax -soo -saarka, waxaan macaamiishayada ku wargelinnaa waqtiga.
Waxaan sidoo kale haysannaa dammaanad wanaagsan iyo siyaasad iibka kadib si aan u hubinno in arrimaha aan la filayn loo xallin karo sida ugu dhakhsaha badan. Qiimo cadaalad ah, tayo sare leh iyo adeeg joogto ah ayaa AOOD siin doontaa macaamiisheena.